यो हप्ताको शनिबार सूर्य ग्र,हण लाग्दै : यी राशिलाई १५ दिनसम्म पार्नेछ अ,शुभ प्रभाव ! – Patrika Nepal
मंग्सिर ९, २०७८ बिहिबार 25
काठमाडौँ : सन् २०२१ सालको अन्तिम सूर्य ग्रहण अर्को हप्ताको शनिबार मङ्सिर १८ गते (४ डिसेम्बर २०२१)लाग्दैछ।
चन्द्रग्रहण ज,स्तै सूर्यग्र,हण पनि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घ,टना हो। ज्योतिषमा ग्र,हणलाई अशुभ घ,ट,ना मानिन्छ।
यहीँ कारण ग्र,हण कालमा शुभ कार्य र पूजा-पाठ गर्न नि,षेधित छ। सू,र्यग्र,हणको अवधिभर सूर्य पी,डि,त हुन्छन्, जसकारण सूर्यको शु,भता,मा कमी आउँछ।
चर्चित ज्योतिषाचार्यहरुका अनुसार चन्द्रग्रहण पछि सन् २०२१ को अन्ति,म सूर्यग्र,हण यहीँ ४ डिसेम्बर अर्थात् मङ्सिर १८ गते शनिबारको दिन लाग्दैछ।
यस दिन मार्ग कृ,ष्णपक्षको औं,सी तिथि छ। सूर्य ग्रहण ४ डिसेम्बरको बिहान १० बजेर ४४ मिनेटमा सुरु हुनेछ, जुन दिउँसो २ बजेर २ बजेर ५२ मिनेटमा समा:प्त हुनेछ।
यो सूर्यग्रहण अन्टार्क्टिका, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अमेरिकाबाट देखिनेछ। यो ग्रहण नेपालबाट भने देखिने छैन। ज्योतिष शा,स्त्र अनुसार नेपालबाट यो सूर्यग्रहणदेखिनेछैन,
जसकारण यसको सूत,क काल पनि मान्य हुनेछैन। सूर्यग्रहण लाग्नुभन्दा १२ घण्टा अघि देखि नै सूतक काल सुरु हुन्छ। यो ग्र,हण उपछाया हुनेछ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार पूर्ण ग्र,हण हुँदा मात्र सूतक काल मान्य हुन्छ। आंशिक या उपछाया हुँदा सूतकका नियम पालन अनिवार्य हुँदैन। सूर्य र पृथ्वीको बीचमा च,न्द्रमा हुँदा जब चन्द्रमाको छायाँ पृथ्वीमा आइपुग्छ त्यसबेला छायाँभित्र परेका मानिसले सूर्यग्र,हण भएको देख्छन् ।
चन्द्रमाको छायाँ एक हजार किलोमिटर लामो तथा दुई सय पचास किलोमिटर चौडाइको हुन्छ । यही क्षेत्रका मानिसले सूर्यग्र,हण देख्ने गर्दछन् । यस्तो छायाँ सधैँ एकै ठाउँमा देखिंदैन ।
त्यसैले सूर्यग्रहण कुनै देशबाट देख्न सकिन्छ भने कुनै देशबाट देख्न सकिँदैन । पृथ्वीमा सघन र विरल गरी दुई प्रकारको छायाँ पर्छ । सघन भनेको मुख्य छायाँ हो, जुन बढी अँध्यारो हुन्छ भने विरल भनेको कम अँध्या,रो छायाँ हो ।
सघन छायाँले छेकेकोे ठाउँमा परेका मानिसहरूले खग्रास अथवा वलय सूर्यग्र,हण भएको देख्छन् अर्थात् सूर्य पूरै ढाकिएको देख्छन् । विरल छायाँमा परेका मानिसले खण्डग्रास अर्थात् सूर्यको केही भाग मात्र छेकिएको देख्छन् ।
यसरी उही ग्र,हण कसैले पूरै ढाकेको देख्छन् भने कसैले अलिकति मात्र देख्छन् त कसैले ग्र,हण देख्ने मौका पाउँदैनन् ।
पूर्वीय समाजमा अत्रिमुनिका सन्तानहरूले खगोल अध्ययन गरेको इतिहास भे,ट्न सकिन्छ
भने सूर्यग्रहणको जानकारी गराउने तथा गणनासमेत गर्ने प्रथम आचार्यका रूपमा अत्रिमुनिलाई ऋग्वेदले उल्ले,ख गरेको पाइन्छ । धर्मशास्त्रको मान्यताअनुसार ग्र,हण राहु र केतुका कारणले हुने गर्दछ । चन्द्रग्र,हण कारक राहु हो भने सूर्यग्र,हण कारक केतु हो भन्ने मान्यता पु,राण तथा धर्मशास्त्रमा भेटिन्छ ।
आयुर्वेदले चन्द्रग्रहणले मानिसमा कफको मात्रा बढाउँछ र मनको शक्ति कमजोर बनाउँछ भन्छ । सूर्यग्र,हणले मानिसहरूको पाचन क्षमता तथा आँ,खाको तेजमा ह्रा”स गराउने गर्दछ भने पित्तशक्ति कम,जोर पार्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
ग,र्भ वती स्त्रीले सूर्यग्र,हण वा च’न्द्रग्रहण दुवै हेर्न हुन्न भन्ने मान्यता छ भने हेरेमा ग,र्भमा रहेको शि’शुको अ¨भ¨ हुने अथवा गर्भस्राव हुनसक्ने चेतावनी दिने चलन छ । गर्भवतीलाई कुनै पनि धारिलो चीजजस्तो कैँ’ची वा च”क्कुले कुनै पनि कुरा का:_ट्न रो”क्ने चलन हा”म्रो समाजमा छ ।
यस्ता धारिला वस्तुले केही काटेमा गर्भमा रहेको शिशुको कुनै अ¨ का:_टिन्छन् र कुनै कुरा सिलाएमा विभिन्न अ¨हरू जोडिन जान्छन् भन्ने मान्यता छ ।
ग्रहण लाग्नुभन्दा पहिले नदी या तलाउमा गई स्नान गरेर शुद्घ भई विभिन्न मन्त्रको जप गर्नाले म”न्त्रसि”द्घि हुने मान्यता तान्त्रि”कहरूको छ । हि,न्दु प रम्पराअनुुसार ग्रहणको सुरुमा, मध्यमा र अन्त्यमा स्ना,न गरी शु,द्घ हुने चलन छ ।
Prevपर्सी मंसिर १० गते सवारी आवातजावत बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो !
Nextभारतीय सीमामा चीनको सैन्य परीक्षण र अत्याधुनिक हतियार प्रदर्शन